Mpisoloky milaza ho mpivarotra menaka lavanila sandoka no tratra tany Maroantsetra. Efatra mianadahy izy ireo ka vehivavy ny roa. Raha ny loharanom-baovao dia avy any Antalaha sy Sambava izy ireo ka 3 - 6 tapitrisa Ar no hivarotany ny menaka lavanila 1 litatra. Tsy menaka vanila akory anefa ilay hamidin’izy ireo fa zavatra hafa. Menaka sakafo no hafangarony amin’ny saribao mba hampiova ny lokony. Rarahin’izy ireo ireo Foster Clark manana tsiro lavanila avy eo ilay menaka ka nisy ireo efa voafitany. Olona iray no fantatra fa efa nahazoan’izy ireo 2 tapitrisa Ar tamin’ity menaka lavanila sandoka ity. Ny zandary ao Maroantsetra moa no nahatratra azy ireo noho ny loharanom-baovao avy tamin’ny olona tsara sitrapo. Efa naiditra am-ponja vonjimaika ny alatsinainy teo izy efatra mianadahy ireto. Mbola karohina ireo namany telo hafa.